Brezila: Manome Fahafahana Mamorona Fiainam-baovao Aorian’ny Fiainana Tany Am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Brezila: Manome Fahafahana Mamorona Fiainam-baovao Aorian'ny Fiainana Tany Am-ponja
MpanoratraJoão Miguel Lima
Voadika ny 19 Oktobra 2011 12:17 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Català, عربي, 日本語, македонски, Ελληνικά, русский, Português, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Français, English
Tany amin'ny 1990 tany dia voampanga i Ronaldo Monteiro hoe mpaka vola amin'ny alalan'ny fakàna an-keriny olona ka voasazy 28 taona an-tranomaizina tany Brezila. Nandritra ny fotona laniny tany, Monteiro sy ireo mpiara-mifonja taminy dia niasa saina momba ny fahalavorarian'ny fiainan'ireo fianakavian-dry zareo nandritra ny tsy naha-teo azy ireo.Ho fiatrehana izay toe-javatra izay dia nanangana trano fiasàna tao anatin'ny fonja tao ihany ry zareo hanodinany sy hivarotany taratasy. Ny ampahany tamin'ny vola azo dia nentina namatsiana ny fampitaovana io toeram-piasany io, ary ny ambiny kosa dia nifampizaran-dry zareo tamin'ny fianakaviany. Toy izany no fomba nanombohan'ny tetikasa Uma Chance (Vintana iray).
Ny Center for Digital Inclusion (CDI) na Foibe ho an'ny Fampandraisan'anjara Dizitaly dia nanomboka nanome fampiofanana fohy momba ny teknolojian'ny fampitam-baovao ho an'ireo gadra. Nisoratra anarana i Monteiro ary nalaky nahay; tsy ela dia izy indray no nasaina mba hampianatra. Nitatra tamin'ireo toeram-pamonjàna hafa ilay tetikasa, ary nantsoina mba handray anjara tamin'izany ny fianakavi
Anatin'ity fanadihadian'i Mixer Productions ity, manazava n y fomba nanarahany làlam-baovao i Monteiro, avy ao anatin'ny fonja ary nanova ny fiainany (soratra mandady amin'ny teny Anglisy):
Hetsika ho fankalazana ny fahatelo taonan'ny ‘Mitombo miaraka amin'ny maha-olom-pirenena' tao amin'ny CISC. Sary avy amin'i Danny Silva, nampiasaina ambany fanomezan-dàlana.
Tamin'ny 2002, raha mbola tany amponja, i Monteiro dia nanangana ny Center of Social and Cultural Integration Foibe Ho Famerenana ara-tsosialy sy kolontsaina, fantatra amin'ny hoe CISC-Uma Chance, izay manome fampiofanana momba ny IT (teknolojia) sy ny asa fanodinana ho an'ireo vondrom-piarahamonin'ny Tribobó, ao São Gonçalo, any Grand Rio de Janeiro. Ry zareo dia miasa mba hahazoan'ny olona maro ny fahafahana hahazo izany, satria ny CISC dia mampanao fampianarana mahandro, fampahatsiarovantena ny olom-pirenena, fomba fiaina ara-pahasalamàna ary fiomanana ho eny amin'ny anjerimanontolo.
Tamin'ny 2003, nomena fahafahana narahana fepetra i Monteiro.
Tamin'ny 2006, Monteiro dia nanao dingana iray lavidavitra kokoa nankany aloha ka nanangana ny Incubadora de Empreendimentos para Egressos (IEE) (Incubator of Small Businesses for Ex-Detainees) Toeram-pikotrehana Fandraharahana Madinika Ho an'ireo Avy Nifonja, izay nahazendana tokoa. Ikendrena ny famerenana ho eo anivon'ny fiarahamonina an'ireo tanora nandika lalàna, ireo voafonja na ireo avy nifonja, ity toeram-pikotrehana ity dia manaitaitra ireo hevitra mitondra lesona manentanentana momba ny fahaiza-manao amin'ny firotsahana an-tsehatra amin'ny tontoon'ny asa fihariana ary ny fitantanana. Ny IEE dia mitady izay hanapahana ny tsingeringerin'ny famerenan-keloka, amin'ny alalan'ny fanomezana vintana ireo lehilahy sy vehivavy mazàna ahiliky ny fiarahamonina. Ilay tetikasa dia nahazo ny fanohanan'ny Petrobras hatramin'ny taona 2006, ary mpiara-miombona antoka amin'ny Ashoka, McKinsey & Company ary anjerimanontolo maro. Noho io asa vita io, i Monteiro dia nantsoina hoe Naman'ny Ashoka.
Ronaldo Monteiro niresaka tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny IEE – sary avy amin'i Danny Silva, nampiasaina ambany fanomezan-dàlanyused with permission
Araka ny ambaran'i Monteiro ao anatin'ilay fanadihadiana etsy ambony, ny tetikasa matota dia “manova fiainana sy manome asa ireo lehilahy” fa tsy hoe hiverina amin'ny fanaovana heloka bevava sy herisetra mitam-piadiana indray. Tamin'ny fandraisam-pitenenana nandritra ny TEDx Sudeste [pt] tamin'ny 2010, nanazava i Monteiro fa ny fanarenana indray dia tokony hahitàna ny fanabeazana, sy ny fanomezana vintana ary fandrisihana hanatanteraka nofinofy.
Ny rafi-pamonjàna ao Brezila dia matetika no ivon-dresaky ny kiana avy amin'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona. Tatitra iray avy amin'ny Amnesty International tamin'ny 2010 no niteny fa ireo voafonja dia “mbola nitohy notànana tamin'ny fomba mampivarahontsana, tsy araka ny maha-olombelona na fepetra mikororosy fahana”, matetika no misedra fahabetsahana tafahoatra ny tokony ho izy ao anatin'ny fonja.
Rehefa afaka ireo voafonja, dia itondra takaitra miaraka aminy, ary ny traikefa henjana avy ao amponja dia matetika no tsy manampy velively amin'ny fiverenana ho eny anivon'ny fiarahamonina. Saingy miaraka aminà fandrisihana sy hetaheta mirindra araka ny tokony ho izy, afaka ny hahita làlam-baovao hananganany indray ny fiainany ireo voafonja